Waa aynu yeeli karaa wixii ay yeeleen reer Jakarta - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Waa aynu yeeli karaa wixii ay yeeleen reer Jakarta
Waa aynu yeeli karaa wixii ay yeeleen reer Jakarta
Muqdisho (Walwaal Online)- Sida uu daabacay wargayska The Jakarta Post ee ka soo baxa dalka Indunuusiya, maxkamad ku taalla magaalada Jakaarta ayaa la soo taagay hooyo waayeel ah oo gacmaha ka xiran, kadib markii xatooyo lagu soo oogay.
Maamada waxaa lagu eedeeyay, ayna qiratay in ay kiilo baradho ah ka xadday baqaar khudaarta lagu iibiyo, maadaama ay baahneed oo ay waysay lacag ay ku iibsato. Ninkii ganacsiga lahaana wuxuu ku adkeystay in sharciga la marsiiyo.
Garsooraha maxkamadda oo xukunkeeda ka hor aqriyay boqolaal qof ayaa isagoo ilmaynaya wuxuu yiri: Hooyo iga raalli ahoow, dadku garsoorka way u siman yihiin oo cidna kama sarreyso sharciga, waana ka xumahay in maanta lagu sooo taagay maxkamad aan garsoore ka ahay.
Hooyo maxkamaddu waxay kugu xukuntay 2 sano iyo bar oo xarig ah iyo $73 oo ganaax ah oo nooga deggan falalka xatooyada ah.Kadibna garsoorihii wuxuu soo siibay koofidiisa, wuxuna ku riday $73.
Wuxuuna dadkii goobjoogayaasha ka ahaa xukunka ku yiri: Qof kasta oo halkaan joogo waxaan ka codsanayaa in uu hooyadaan siiyo $4, si ayaan caawa ula seexan baahidii shalay ku qasabtay in ay wax xaddo. Wallaahi haddii aan awoodi karo waan ganaaxi lahaa qof kasta oo Jakaarta ku nool. Oo sidee ayay Hooyo da’daan ah ugu gaajoon kartaa magaalo hodan ah oo aad ku nooshihiin?!
Isla maalinkaas reer Jakaarta waxay maamadii u uruuriyeen $487,650. Kadibna waxaa loo iibiyay sanadihii xabsiga ahaa, waxaana sheer loogu daray shirkadda Telkomsel oo ah shirkadda isgaarsiineed ee ugu wayn dalka Indunuusiya. Waxaa cajiib ah in dadka ugu badan ee kaalmadaas ka qaybqaatay ay bixiyeen $4 kaliya. Balse wadarteedu waxay ku dhowaatay nus milyan doollar.
Duruuftii iyo baahidii maamadaas ku qasbay in ay wax xaddo waxay maanta haystaan hooyo Luuley Cusmaan Xasan, balse iyadu waxba ma xadin ee dambiil ayay subax kasta madaxa ku qaadataa si ay suuqa ugu soo xamaalato. Aan yeelanno damqashadii iyo deeqsinnimadii reer Jakaarta, ee fadlan hooyo Luuley lambarkeeda 0619572570 ugu dir wixii aad u awoodi karto, oo $1 iyo wixii ka badan oo aad awooddo uga qaybqaado in ay ka baxdo duruufta iyo nolosha adag ee ay maanta ku jirto.
Xigasho: Hussein Sabrie
Previous articleMaxay madaxda maamul gobol-eedyada u booqdaan hay’adda Nabad-sugida
Next articleBooqashada ay xafiisyada galaa bixinay safiir ku xigeenka dowladda Sweden Petra Smitmanis Dry